टेलिकमका राजभण्डारी र ठाकुरले फोर जीका नाममा अर्बौं घोटाला गर्ने दाउ गरिरहेको हालै खुलेका टेन्डरबाटै खुलासा
काठमाडौँ, ३० पुस । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरले ले चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क फोर जीका नाममा अर्बौं रुपैयाँं घोटाला गर्ने दाउ गरिरहेको टेलिकमकै इमानदार कर्मचारीहरुले खुलासा गरेका छन् । टेलिकमको उच्च स्रोतका अनुसार फोर जीको एलटीइ–३ ओपन टेन्डरमध्ये गत सोमबार र बिहीबार खोलिएका टेण्डरमा आएका प्रस्तावले राजभण्डारी र ठाकुरको अर्बौं घोटालाको दाउ छर्लङ पारेको छ । चिनियाँं कम्पनी हुवावेले आफ्नो टेण्डरमा तीन अर्ब पच्चीस करोडमै देशव्यापी रुपमै फोर जी सेवा विस्तार गर्ने स्पष्ट प्रस्ताव राखेको स्रोतले खुलासा गरेको छ । उता, निजी सञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले यसअघि नै करिब चार अर्ब खर्चेर देशव्यापी रुपमै फोर जी सेवा विस्तार गरेर धमाधम बजार कब्जा गरिरहेको एनसेल उच्च स्रोतले बताएको छ । यसरी चारपाँंच अर्बमा सम्पन्न हुने फोर जी नेटवर्क विस्तारका लागि पच्चीस वा एकतीस अर्ब खर्च गरेर टेलिकमलाई धराशायी बनाउन राजभण्डारी र ठाकुर लागिपर्नु आर्थिक घोटालाको दाउबाहेक अरु के हो ! टेलिकमका इमानदार कर्मचारीको भनाइ छ । टेलिकम स्रोतका अनुसार राजभण्डारी र ठाकुरको यस योजनामा मन्त्रालय र अख्तियारका केही उच्च पदाधिकारी भागबन्डा पाउने गरी सहमत भएकाले विभिन्न बहानामा टेन्डरलाई गञ्जागोल पार्ने प्रयास भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार सो टेन्डरमा नोकिया नेटवर्क, जेडटीइ, अल्काटेल, माभिनियर, सिटियसजस्ता प्रतिष्ठित कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे पनि लागत अनुमान अर्थात करिब ३१ अर्बमै सो कार्य हुवावे अथवा जसबाट आफूहरुलाई खोजे जति कमिशन प्राप्त हुन्छ त्यही कम्पनीलाई दिने चाँंजोपाँंजो राजभण्डारी र ठाकुरले मिलाइरहेका छन् । टेन्डर प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँंदै एक टेन्डरदाताले विभिन्न निकायमा मुद्दासमेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ ।
टेलिकमका इमानदार कर्मचारीहरु राजभण्डारी र ठाकुरलाई यसरी चेतावनी दिन्छन्— तपाईंहरु होस गर्नुस्, अहिले पैसाको खोलो बगाएर आफूलाई जोगाउन सफल भए पनि भविष्यमा सजायबाट कसैले बचाउन सक्दैन ! फोरजी सेवाको विस्तारका नाममा ३१ अर्बको टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएर सेवा सञ्चालन गर्दासम्म करिब साढे एक वर्ष लाग्ने टेलिकमकै प्राविधिकहरुले बताए । सन् २०२० सम्म फाइभजी सञ्चालन भएपछि नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने र नेपाली सेवाग्राही सो सेवातर्पm आकर्षित हुने टेलिकम कर्मचारीहरुकै भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा त्यति बेला निरर्थक भइसकेको हुन्छ । त्यस अवस्थामा टेलिकमले ३१ अर्बको लगानी उठाउनै नसक्ने र यति ठूलो घाटा हुँदा टेलिकम धराशायी हुनेछ । यसको सम्पूर्ण जवाफदेही असक्षम राजभण्डारी र नालायक एवं महाभ्रष्ट कहलिएका ठाकुरको हुने टेलिकम कर्मचारीहरुको भनाइ छ । ती कर्मचारीका अनुसार ठाकुर काठमाडौंको नक्साल, बालुवाटार तथा गैरीधारा आसपासका विभिन्न रेष्टुरेन्टमा मादक पदार्थ सेवन गरी मातिएर जथाभावी व्यवहार गर्ने गरेको र आपत्तिजनक अवस्थामा युवतीहरुसँंग भेट्ने गरेका छन् । मात्तिएको अवस्थामा कयौं पटक ठाकुरलाई उनका आसेपासे तथा चाकडीबाज केही सप्लायरले घरसम्म लगिदिएको उनी निकट कर्मचारीले बताए । ठाकुरको सुरासुन्दरीप्रतिको आकर्षणका कारण उनलाई विभिन्न शारीरिक समस्यासमेत आइलागेको आशंका ठाकुरनिकटकै स्रोतले व्यक्त गरेको छ । हालै ठाकुरले बालुवाटारस्थित रेष्टुरेन्टमा एक युवतीसँंग आपत्तिजनक व्यवहार गरेपछि युवतीले अपमानित गर्न लाग्दा सँंगै रहेका सहकर्मीले जोगाएको स्रोतले बताएको छ । यस्तो नालायकको इसारामा राजभण्डारीले सबै अनियमित कार्य गरिरहेको हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन सक्षम टेलिकम दिनहुँं करोडौं घाटामा गइरहेको स्रोतको दाबी छ । यही अवस्था रहे चाँंडै नै टेलिकम हेटौंडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्तै ध्वस्त हुने टेलिकमकै इमानदार कर्मचारीको टिप्पणी छ । राजभण्डारी र प्रबन्धक प्रदीप ठाकुरको भ्रष्ट प्रवृतिले गर्दा टेलिकम प्रति महिना करोडौं रुपैयाँं घाटामा गइरहेको ती कर्मचारीले बताए ।
उता, आरम्भदेखि सञ्चार सेवा प्रदायकहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिरेर पहिलो बन्दै आएको नेपाल टेलिकम प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीको असक्षमता र ठाकुरको भ्रष्ट प्रवृतिका कारण दोस्रो नम्बरमा पुगेको र यही अवस्था रहेमा अब तेस्रो नम्बरमा पुग्ने टेलिकमका इमानदार कर्मचारीहरुबीच अहिले पनि दैनिक चर्चाको विषय रहेको छ । यही मंसिर १ गते मनाइएको राष्ट्रिय कर दिवसमा सञ्चार सेवा प्रदायकहरुमध्ये टेलिकम दोस्रो बन्न पुगेको हो ।
यसैगरी राजभण्डारीको अकर्मण्यताका कारण बीस वर्षमा पहिलो पटक आफूहरु अहिलेसम्म गत आवको बोनस पाउन नसकेकोमा टेलिकम कर्मचारीहरुले आक्रोस प्रकट गरेका छन् । राजभण्डारीलाई बोनस पेश्की दिने अधिकार भए पनि उनले यसतर्फ पहल नगरेको ती कर्मचारीको गुनासो रहेको छ । ठाकुरको इसारामा राजभण्डारीले बोनस नदिनुको दोष मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवमाथि लगाउने गरेको समेत ती कर्मचारीले खुलासा गरेका छन् ।
उपरोक्त समाचारका सम्बन्धमा राजभण्डारी र ठाकुरसँंग पनि जानकारी लिन पूरा समाचार डट कमले सम्पर्क राख्न गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । पूरा समाचार डट कमको नेपाल टेलिकम वा त्यहाँका कुनै पनि पदाधिकारीसँग कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । नेपाल टेलिकम देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा बन्न सक्छ तर राजभण्डारी र ठाकुरका अनियमिताका कारण यो धराशायी बन्दै गएको बारे हाम्रो विश्वस्त स्रोतले निरन्तर खुलासा गर्दै आएको छ । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो टेवा दिन सक्षम नेपाल टेलिकमलाई ध्वस्त बनाउने गतिविधि टुलुटुलु हेर्न नमिल्ने कुरा आत्मसात गरेर पूरा समाचार डट कमले विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको मात्र हो । टेलिकममा सर्वसाधारणका रगत–पसिना बगाएर कमाइ गरेको लाखौं रकम रकम सञ्चारसेवाको प्रयोगबाट प्रतिसेकेन्ड लगानी भइरहेको छ । त्यस्तो रकममा अनियमितता नहोस् र टेलिकम अत्यन्त उचाइमा पुगोस्, आर्थिक रुपमा उन्नतिको शिखरमा पुगोस् हाम्रो चाहना छ । तर यसमा अनियमितता गर्नेको भण्डाफोर गर्न हामी हर समय तत्पर छौं, कुनै चुनौती आए पनि पछाडि हट्ने छैनौं ।